အနံ့ခံဆေး Xiaomi Viomi VF1-CB | TeraNews.net
Xiaomi Viomi VF1-CB အနံ့ခံဆေး
စာရေးသူ Nikitin Eugenius Published 24.11.2021
ဒါဟာ 21 ရာစုဖြစ်ပြီး၊ ရေခဲသေတ္တာထုတ်လုပ်သူတွေဟာ ရေခဲသေတ္တာခန်းထဲမှာ မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့ဆိုးတွေနဲ့ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ မသိကြသေးပါဘူး။ မဟုတ်ဘူး၊ အမှတ်တံဆိပ်အတော်များများမှာ လေသန့်စင်ဆေးပါရှိပေမယ့် တစ်နှစ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်နှစ်အကြာမှာတော့ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းသည် ဖြုတ်တပ်၍မရပါ၊ သင်သည် စစ်ထုတ်မှုများကို သင်ကိုယ်တိုင် မပြောင်းလဲနိုင်ပါ - သခင်ကို ခေါ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပြီးတော့ ဒီပြဿနာက မော်ဒယ်အသစ်တွေနဲ့ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ပျံ့လွင့်နေတယ်။
Xiaomi Viomi VF1-CB အနံ့ခံဆေး - အဲဒါဘာလဲ
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ စိတ်ကူးအရ၊ သေးငယ်သော ကိရိယာသည် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ ဘက်တီးရီးယားများကို တိုက်ထုတ်သင့်သည်။ Neutralizer သည် ညစ်ညမ်းသောလေကို သူ့အလိုလိုဖြတ်သန်းပြီး အထူးစစ်ထုတ်မှုများဖြင့် သန့်စင်ပေးသည်။ သာယာသောအခိုက်အတန့်သည် မတူညီသောအပူချိန်အခြေအနေများတွင် စက်ပစ္စည်း၏လည်ပတ်မှုဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းကို ရေခဲသေတ္တာ၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့် လတ်ဆတ်မှု သုညအကန့်ထဲတွင် ထားနိုင်သည်။
သေချာတာကတော့ စိတ်ကူးက မဆိုးပါဘူး။ သို့သော် သံသယရှိသူများပြောသည့်အတိုင်း တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းသွားပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ကိရိယာသည် ပလတ်စတစ်၊ ပုပ်၊ ငါးနှင့် အသားထွက်ပစ္စည်းများ၏ အနံ့ကို အမှန်တကယ် ဖယ်ရှားပေးသည်။ သုံးစွဲသူ၏ ပျော်ရွှင်မှုသာလျှင် ကြာရှည်မခံပါ။ ၆လတိတိ။ ထုတ်လုပ်သူမှ တူညီသော အာမခံကာလကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ Viomi VF6-CB အနံ့စုပ်စက်၏ ဒီဇိုင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် neutralizer အသစ်တစ်ခုအတွက် စတိုးဆိုင်သို့ အလျင်အမြန်လိုသည်။ 1$ စျေးက အရမ်းမကြီးပါဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံး၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းကို 10 နှစ်ကြာလျှင် လေကောင်းလေသန့်အတွက် ဒေါ်လာ 10 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Viomi VF1-CB: အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
neutralizer သည် ၎င်း၏အလုပ်ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ မနှစ်မြို့ဖွယ် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားရန် အာမခံပါသည်။ ဒါဟာ သေချာပေါက် သန့်စင်မှုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပါ။ သာယာသောအခိုက်အတန့်မှာ ၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။ ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်း - အလုပ်၏ 10 လအတွက် $6။
အားနည်းချက်များတွင် ရေခဲသေတ္တာအတွင်း Xiaomi Viomi VF1-CB အနံ့ဆိုးထွက်ဆေးကို နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြဿနာပါဝင်သည်။ ကြော်ငြာများတွင် သုံးစွဲသူများသည် ကိရိယာကို အတွင်းနံရံတွင် အံဝင်ခွင်ကျ ချိတ်တွဲကာ အဆင်ပြေမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ လက်တွေ့မှာတော့ အရာအားလုံးက ပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်။ အတွင်းတွင် အစိုဓာတ်ရှိနေခြင်းကြောင့် (အနည်းငယ်ရာခိုင်နှုန်းပင်) ကိရိယာကို နံရံတွင် ချိတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ မျက်နှာပြင်ကို ခြောက်သွေ့အောင် ပွတ်တိုက်ရန် လိုအပ်ပြီး Viomi VF1-CB စက်သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပြုတ်ကျနိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
I. အကယ်၍ သင်သည် အနံ့ခံဖျက်ဆေးနှင့် လုံးလုံးလျားလျား အမှားတွေ့နေပြီဆိုလျှင်၊ စက်အတွင်း၌ HEPA စစ်ထုတ်ခြင်း မရှိပါ။ (ဖြုတ်တပ်စဉ်အတွင်း)။ အိမ်သုံးလေသန့်စင်စက်တွေမှာ မြင်ဖူးနေကျပုံစံပါ။ စက်ပစ္စည်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ - ထုတ်လုပ်သူသာသိသည်။ သို့သော် အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ တိုက်ရိုက်တာဝန်များကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ Xiaomi Viomi VF1-CB ကိုဝယ်ယူလိုပါက - သို့သွားပါ။ ဒီ link ကို.
AliExpress မှ အမြင်အာရုံအတွက် ကွန်ပျူတာမျက်မှန်